रामधुनीमा बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता - हाम्रो शब्द
रामधुनीमा बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता
रामधुनी– सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. १ झुम्का बजारको राजमार्ग छेउमै स्थानिय ४५ बर्षीया इन्द्रा देवी ठाकुर मुम्फली बदाम बिगत तीन बर्ष देखि बिक्री गर्दैआइरहेकी छिन् । उनी आफ्नो भनाइ राख्दै भन्छिन्,‘यदि रामधुनी नगपालिकाले हामी फुटपाथमा आफ्नो दैनिक परिवार पाल्नको लागि सहज स्थान सहुलियतका साथ उपलब्ध गराए हामीहरु पनि यसरी बस्दैन थियौं । गरिबीका कारण त आज यस्तो भएर पनि जिवन यापनका लागि व्यवसाय गर्न बाध्य छौं । छ जनाको परिवार पल्नु, अनी त्यसैमाथि कोठा भाडा महीनै पिछे तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनले पोखिन ।’
देशको पूर्वपश्चिम जोडने राजमार्ग रामधुनीको झुम्का बजार हुँदै गएको छ । नगरको वडा नं. १ र ५ मा बजार अवस्थित रहेको छ । सडकको दुवै छेउमा निजी पक्की घरहरुमा व्यापार व्यवसाय संचालन रहेको छ । बजारमा फुटपाथ व्यापारीहरु सडकको छेउमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । फुटपाथे व्यापारीहरु विभिन्न फलफूल लगायतका सामाग्रीहरु बिक्रिका लागि राख्छन । बजारको पूर्वपट्टी यहाँ लाग्ने हाटबजारहरु बुधबार र शनिबारका दिन सडक छेउमा नै बिभिन्न व्यापारीहरुले पसल सञ्चालन गरिरहेको भेटीन्छन् । रामधुनी १ का अनिल रौनियारले सडक छेउमा नै सञ्चालित रहेका फुटपाथे व्यापारले गर्दा दुर्घटन हुने जोखिम रहेको बताउछन् ।
दैनिक जिबिको पार्जन गर्नका लागि फुटपाथमै व्यापार सञ्चालन गरेर बसेकालाई रामधुनी नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न नसकेको देख्दा दुःख लागेर आएको र फुटपाथे त्यस्ता व्यापारीहरुलाई नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको उनी बताउछन् । यस बिषयमा कुराकानी गर्दा उद्योग बाणिज्य संघ झुम्काका महासचिब दुर्गा प्रसाद फुयालले बजार व्यवस्थापनको खाचो रहेको भनाइ राख्नु भयो । उहाँले संघमा दर्ता रहेका व्यापारीहरु व्यवस्थित रुपले पसल सञ्चालन गर्दै आएको र संघमा दर्ता नरहेका व्यापारीहरु फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । नगरको वडा नं. १ मा रहेको कृषी बजार क्षेत्र समेत अव्यवस्थित रहेको देखिन्छ । कृषी बजारमा केही तरकारी पसल सञ्चालनमा हरेका छन् भने त्यहाँ धेरै जसो फेन्सी पसल सञ्चालित रहेका छन् । कृषी बजारमा पसलहरु व्यवस्थित नहुदाँ मानिसहरु आवाजावत गर्ने सडकमै व्यापारीहरु पसल थापी तरकारी र अन्य बस्तु बेचिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा हाटबजार आउने सेवाग्राहीहरुले समस्या भोग्न बाध्य रहेका छन् ।
झुम्का बजार स्थित रहेको राजमार्ग क्षेत्र फराकिलो बनाउने भन्दै छेउमा रहेका रुखबिरुवाहरु नगरपालिकाले एक बर्ष अगाबै कटान गरिसकेको छ । बजारक्षेत्रमा भिडभाडले गर्दा धुलोले हावाहुरीको समयमा समस्या भएको व्यापारीहरु बताउछन् । बजार क्षेत्रमा रहेको बाबा ज्वेलर्सका सञ्चालक पुर्णबहादुर श्रेष्ठले धुलो र अव्यवस्थित फोहोरले गर्दा व्यापार सञ्चालनमा पनि समस्या भइरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्किने माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँ भन्नुहुन्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले दैनिक गाडि ओहोर दोहोर गर्ने गरेका सवारीसाधनहरुका कारणले बजार क्षेत्रमा धुवाधुलो युक्त हुदाँ पनि रामधुनी नगरपालिका व्यवस्थित गर्न नसेकेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
यहाँमात्र नभएर अन्य वडा नं. २,४,६,८ मा लाग्ने हाटहरु अव्यवस्थित रहेको स्थनीय बासिको भनाइरहेको छ । रामधुनी २ नं. वडाको शुक्रबारे हाट तीत्रिबनमा सुनसरी–मोरङ्ग सिचाइ योजनाको नहरको दुवैतिर हाट लाग्ने गरेको छ । बाटोरहेको सो–स्थानमा हटियाको दिन आवत–जावतमा निकै समस्या पर्नेगरेको स्थानिय बासिको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै नगरको वडा नं. ४ स्थित लालपूरमा सडक छेउमा नै हटिया लाग्दै आएको छ । सो बजार क्षेत्रमा साधुरो स्थान रहेकोले हटिया आउनेहरुको सडममा नै भिडभाड हुने गर्दछ । रामधुनीमा लाग्ने हाटबजारहरु अव्यवस्थित रहेको यी केही उदारणहरु मात्र हुन् । प्राय नगरको सबै वडामा दिन फरक गरी हाटबजार लाग्दै आएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हाटबजारको बेग्लै महत्व रहेको छ । सावीक देखि लाग्दै आएको हाटहरुमा स्थानीय उत्पादन, घरायसी सामाग्री, खाद्यान्न, लगायत बिभिन्न सामाग्रीहरु खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ ।
यस बिषयमा कुराकानी गर्दा रामधुनी नगरपालिकाका ५ नं. वडाध्यक्ष डेगराज फुयाल भन्नुहुन्छ, “मेहन्द्र राजमार्ग जस्तो राष्ट्रिय लोकमार्ग रहेको रामधुनी नगरपालिकाको बजार क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा नगरपालिकाको बिषय रहेको र यस बारेमा निष्कर्ष निकाल्नका लागि नेपाल सरकारले बनाउन लागेको पूर्वपश्चिम राष्ट्रिय महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने गरुयोजना रहेको र यस कार्यले के कति काम हुन्छ अनीमात्र यस्को व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने छ । त्यस्तै रामधुनी नगरपालिकामा रहेको हाटबजारमा रहेका सम्पुर्ण कपडा व्यापारीले यदि कोही सागसब्जि व्यापारीले, म व्यापार गर्छु भन्नु भयोभने हामी उहाँहरुको लागि स्थान खालि गरिदिन्छौं । भन्ने समझौंता रहेको तर त्यसरी नजाने अनी फुटपाथमा व्यापार हटाउनु भन्दा हामी कहाँ जानु भन्नु हुन्छ त खोजे त त्यत्रो रामधुनी नगरपालिकाले हाटबजार क्षेत्रको लागि भाडामा लिएको उनीहरुको लागि नै रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
(नोटः नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुनसरीको समन्वय तथा रामधुनी नगरपालिका कार्यालयको सहयोगमा तयार पारिएको लेखनबृती हो ।)
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पूर्वराजा अस्पतालमा